SARIPIKA: Hiram-pitiavana Ataon’ireo Mpianatra Kazakh Ho An’ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2013 16:50 GMT
Mpianatra maherin'ny 3.000 no nivorivory teo anoloan'ny oniversite ao andrenivohitr'i Kazakhstan androany mba haneho ampahibemaso ny fitiavany ny filoham-pirenena, Noursoultan Nazarbaïev. Ny Oniversitem-panjakana mampianatra ny maha-olona sy ny lalàna ao Astana no nikarakara ny hetsika mba hankalaza ny Andron'ny Filoha Voalohany, andro fety nampidirana tamin'ny taon-dasa ho fanomezam-boninahitra ny filoha am-perinasa izay nitantana ny firenena manankarena solitany nanomboka tamin'ny nahazoany fahaleovantena tamin'ny taona 1991.
Mampiseho ireo mpianatra mihazona balaonina miendrika fò sy miventso fiderana ho an'i Nazarbayev ao aorian'ny rektoran'ny oniversite ity lahatsary eto ambany ity. Mihira ireo hira sy dihy ankafizin'ny filoha indrindra ihany koa ireo mpianatra. Misoratra hoe “Tiako i Kazakhstan. Tiako Nursultan” ny sora-baventy lehibe eo amin'ny tranobe ao an-damosin'ireo mpianatra.
Maro ireo mpiserasera no nihevitra fa lasa lavitra loatra amin'ny fankalazana an'i Nazarbayev ny oniversite nanatontosa ny hetsika. Mpisera media sosialy nampitaha ny hetsika amin'ny famoriam-bahoaka marobe izay matetika karakarain'ireo manampahefana ao Korea Avaratra mba hankalazàna ny fianakavian'ny mpitondra.
Nizara ny lahatsary tao amin'ny Google + i Maqsat Linder nanontany [ru] manadrohadro hoe:
Tsy i Korea Avaratra ve izany?
Tamin'ny tatitra tamin'ny Radio Azattyq momba ny hetsika, Kair nanoratra [ru] hoe:
Hadalana iombonana. Ny zavatra sisa tsy natao dia ny fanorohana ny vodin'[‘i Nazarbaïev ]. Tahaka ny ao Korea Avaratra mihitsy izany. Mahamenatra.
Mihevitra ireo mpiserasera sasany fa zary nanimba fotsiny ny lazan'ny filoha ny hetsika tao Astana. Tamin'ny lahatsary misy ny hetsika tao amin'ny Youtube, Kolya Ivanov naneho hevitra [ru] hoe:
Lanonam-bendrana. Zava-dratsy kokoa no ataon'ny filohan'ny [oniversite izay nampiantrano ny hetsika] fa tsy zavatra tsara ho an'ny filoha. Manaja an'i Nazarbaïev aho ary mino aho fa mendrika hajaina izy. Saingy tsy hamonjy hetsika tahaka izao mihitsy aho.
Azo lazaina daholo izay tiana ambara tamin'ny tao Astana fa tsy maningana ho an'ny ao Kazakhstan. Manerana an'i Azia Afovoany, mankalaza tsy an-kiato ireo mpitondra mpanao politika ny manampahefana sy ny fampahalalam-baovao fehezin'ny fanjakana, noho ny fanantenana hiaro ny asany sy ny satany ka mampiseho fankatòavana amin'ireo mitàna ny fahefana.